Curis | HIGIL
Category Archives: Curis
Curis / Uncategorized
Posted on Axad, Diseembar 23, 2012 by Jidhidhico	• Faallo u dhaaf
Midnimada dad badan baa u qeexa mid-ahaansho. Dhabtii, midnimadu waa mid-ku-ahaansho. Halka ay qeexdinta hore ka muujinayso wax mid ah, oo aan xitaa laba ahayn, waxay qeexdinta xigtaayi muujinaysaa wax ka badan mid, oo haddana isku xiran. Xiriirkan weeyi midnimadu. Waxa uuna xiriirkani muuq leeyahay marka isaga dartiis la’isugu yimaaddo—oo ay duulal kala yaallaayi isugu … Sii akhri →
Posted on Khamiis, Nofeembar 24, 2011 by Jidhidhico	• Faallo u dhaaf
Curiskani waxa uu aaraa’ u yahay daraasad soo socota; waxaana qoray Idiris M. Cali. Xigashaduna waxay u ahaatay WardheerNews, oo hor daabacday curiskan. Akhris wacan: Sii akhri →